Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Malcolm X
အမေရိကန် အသားအရောင်ခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးကာလတုန်းက မတရားဖိနှိပ်ခံရတဲ့ လူမည်းတွေရဲ့ လုပ်ရှားမှုအကြောင်းပါ။ အဓိကကတော့ နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Malcolm X ရဲ့အကြောင်းပါ။ သူုကို လူမည်းတွေသာမက Social Justice သမားတွေပါ လေးစားပါတယ်။ Hollywood က နာမည်ကျော်မင်းသား -Danzel Washington ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Malcolm X isa1992 biographical film directed by Spike Lee about the African-American activist and black nationalist Malcolm X. The story is based on The Autobiography of Malcolm X as told to Alex Haley. Denzel Washington was nominated for an Academy Award for Best Actor for his role as Malcolm X.
ထွေလာ (Preview) - ဒီမှာနှိပ်ပါ (Click Here)
ဘာသာစကား (language) - အင်္ဂလိပ် (English)
စာတမ်းထိုး (Subtitle) -
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - ၁၉၉၂ (1992)
အမျိုးအစား (Gerne) - အတ္ထုပတိ (Biography)
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် (To Watch) - ဒီမှာနှိပ်ပါ (Click Here)
Fashion TV (တိုက်ရိ်ုက်ကြည့်ဖို့ ပလေးကို နှိပ်ပါ)
* USA * ကိုးရီးယား (Korea) * ကနေဒါ * ကမောဒီးယား (Cambodia) * ဂျပန် (Japan) * စင်္ကာပူ (Singapore) * တရုတ် * တိဘက် (Tibet) * ထိုင်း (Thai) * ထိုင်ဝမ် (Taiwan) * ဖိလစ်ပိုင် * မလေးရှား (Malaysia) * မြန်မာ (Myannmar) * သြစတြေးလျ (Australia) * အင်္ဂလန် (English) * အင်္ဂလိပ် - UK * အင်္ဂလိပ် (English) * အင်ဒိုနီးရှား (Indonesia) * အာဖဂန်နစဏတန် (Afghanistan) * အာဖရိက (Africa) * အိုင်ယာလန် (Irealand) * အိန္ဒိယ (India) * အီတလီ (Italian) * ဥရောပ-ရိုမေးနီးယား *Documentary + drama (Drama) + ဂီတ (Musical) + ဇာတ်ကြမ်း (Acion) + မှုခင်း (Crime) + သည်းထိတ်ရင်ဖို (Horror) + သမိုင်း (Historical) + ဟာသ (Comedy) + အချစ်ဇာတ်လမ်း (Romatic) + အတ္ထုပတိ (Biography) + အားကစား (Sport) + နိုင်ငံရေး (Politics)
Subscribe to I.Film Fest
Link တွေပျက်နေရင်ကျေးဇူးပြုပြီး Cbox မှာရေးပေးပါ။ ဘယ်အစီအစဉ် (ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း၊ daily clips သီချင်း) တွေကို ကြိုက်-မကြိုက် ဆိုတာကိုလည်း ရေးပေးပါ။
Best Foreign Films Series